Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Seychelles Very Mpisava Lalana Mpizaha tany ao Myriam St.Ange
Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao • People • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism
Myriam St.Ange dia nody mandry tamin'ny sabotsy 18 septambra 2021, efatra andro taorian'ny fitsingerenan'ny faha-74 taonany tao amin'ny nosy La Digue.
Ny fianakaviana St.Ange dia nivory tao amin'ny fizahan-tany ao La Digue nandritra ny roa andro lasa teo akaikin'ny rahavavin'izy ireo.
Nodimandry izy ary voahodidin'ny zanany lahy, ny anadahiny ary ny fianakavian'izy ireo tamin'ny fanaovana veloma izany.
Myriam sy ny zanany lahy 2 dia nanova ny tranon'ny fianakavian'i La Digue Island St.Ange ho trano fandraisam-bahiny Chateau St.Cloud.
Myriam St.Ange sy ny zanany roa lahy Carl ary Sydney Mills dia nanova ny tranon'ny fianakavian'i La Digue Island St.Ange, ny Chateau St.Cloud any Seychelles, ho hotely fianankaviana iray rehefa notazonin'izy ireo ny toetran'ny vanim-potoana fanjanahantany.
Myriam sy ny zanany lahy dia nahavita fandidiana nahomby satria nanohy nilalao teboka lehibe amin'ny fampandrosoana ny fizahantany amin'ireo nosy izy.
Ny fianakaviana St.Ange dia nivory tamin'ny fizahan-tany La Digue nandritra ny roa andro farany teo akaikin'ny rahavavin'izy ireo, ary maty izy voahodidin'ny zanany lahy, rahalahiny ary ny fianakavian'izy ireo tamin'ny fanaovana veloma.
Myriam St.Ange dia rahavavin'i Alain St.Ange, izay minisitry ny fizahantany teo aloha, fiaramanidina sivily, seranan-tsambo ary ranomasina ny Seychelles, ary maro amin'ireo mpianakaviny ankehitriny no mpilalao fizahan-tany mahomby any Seychelles.
Ny resaka kolontsaina
2021 NYC White Label Expo's Manufacturer ...
Ny vondrona Lufthansa dia namerina ny vola nindramina tamin'ny Alemanina...
Malalaka izao ny mpandeha tonga any Ouganda taorian'ny...
Mpizahatany Rosiana voafandrika any Afrika Atsimo taorian'ny...
Ny mpanankarena ihany ve no afaka manao fety any...
Fiaraha-miasa tsy ara-dalàna ho an'ny orinasa sy iraisam-pirenena...
Chapman Freeborn, orinasa mpanasa fiaramanidina any UK, dia nanokatra ny…
Pegasus Airlines: Net Zero Carbon Emissions amin'ny 2050
Haitraitra Vaovao: Ny Tasman dia manambara ny voalohany amin'ny Aostralia
Minisitry ny Fizahantany Jamaika, filoha vaovaon'ny Inter-Amerikana...
Foara Iraisam-pirenena momba ny zavakanto ankehitriny any Kyoto
Ny Bahamas dia manambara ny fandraisany anjara amin'ny WTM London...
Mitarika ny lalana miaraka amin'ny Economy Maitso Maneran-tany i Shina
Mihoatra ny ambaratonga vaovao ny fahafatesan'ny zava-mahadomelina tafahoatra: 100,000 tamin'ny...